usapho kunye nekhaya | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Udidi: intsapho kunye nekhaya
Ukubalwa kwendlu yokwakha
ezaposwa ngomhla 21.09.2021 21.09.2021
ukwakha indlu ayisiyonto ilula, kufuneka alungiselele kwangaphambili. Kufanelekile ukuqala ngokubala iindleko zokwakha indlu, ukuqala kwiindleko zeprojekthi, ukuphela kweendleko zokufaka izibambo zeminyango. Ndiyabulela kolu balo lwamaxabiso endlu, ungasasaza uhlahlo-lwabiwo mali lwakho, ungaboleki kubahlobo kwaye uhlala ngokuzolileyo.
Hlamba Umhlobo Wakho-Iingcebiso eziluncedo zokuhlamba izilwanyana
ezaposwa ngomhla 20.08.2021 20.08.2021
Abahlobo bethu boboya bafuna ukhathalelo kunye noqwalaselo. Kuyimfuneko ukuba uhlambe izinja kungekuphela emva kohambo. Kwaye iikati ezinendlela elungileyo ziya kukonwabela ukuhlamba.
ezaposwa ngomhla 31.07.2021 31.07.2021
Yintoni enokuba ntle ngakumbi kunedike eliphakathi eyadini, kufutshane nalo unokuthatha umhlala phantsi kunye nencwadi, i-barbecue kunye nenkampani enengxolo. Kodwa ulenza njani ichibi lasekhaya?
Iimpawu zeentlobo ezahlukeneyo zomthi
ezaposwa ngomhla 15.06.2021 15.06.2021
Kukho inani elikhulu leentlobo zemithi, yeyiphi imithi onokuyikhetha, ngenjongo ethile okanye enye? Masiqwalasele ngakumbi ubuchule neengozi zemithi eyahlukeneyo.
ezaposwa ngomhla 02.06.2021 02.06.2021
Eyona nto inzima ekukhetheni ukuqonda ukuba yeyiphi injongo oyifunayo. Siza kukuxelela malunga neempawu eziphambili zebar yeprofayile, zeziphi iintlobo ezikhoyo, iingenelo zabo kunye neengozi zabo.
Imakhishithi yefayibha yeGypsum yokulinganisa umgangatho
ezaposwa ngomhla 01.06.2021 01.06.2021
Xa usenza ukulungiswa kwamakhaya, uninzi lujamelana nengxaki yemigangatho egoso evela kumakhi. Ukulinganisa njani umgangatho, yeyiphi into yokwakha oza kuyisebenzisa? Makhe sijonge kwi-GVL slabs.
I-Ista: ukhetho lweenkolelo ezindala kunye neempawu zemozulu
ezaposwa ngomhla 13.04.2021 13.04.2021
Kule mihla, ii-Ista ezininzi zingenzi nto ziyinto yanamhlanje-indalo, i-barbecue. Kwaye ookhokho bethu bayibhiyozela njani i-Ista? Zeziphi izithethe kunye neempawu ezazikho kule holide?
Yintoni oza kuyinikela ngePasika - Izipho ezili-10 eziphezulu
ezaposwa ngomhla 23.03.2021 23.03.2021
Ngaba uyafuna ukothusa abantu obathandayo okanye izalamane zakho ngePasika? Kodwa andazi ukuba mandinike ntoni? Siza kukubonisa TOP 10 imibono yezipho!
Iinyani ezi-8 zokuzonwabisa ngePasika
ezaposwa ngomhla 21.03.2021 21.03.2021
Uvuko lukaKrestu ngumhla ohlonitshwayo kunye neholide kaThixo, ebhiyozelwa kuzo zonke iimbombo zomhlaba, ngaphandle kwenkolo. Ngokwesiko i-Ista idume ngamasiko ayo akudala. Kodwa zeziphi iinyani ezinomdla onokuzifunda ngaye?
Ukulungiselela i-Greenhouse yexesha elitsha
Abalimi begadi abanamava kunye nabalimi bayazi ukuba i-greenhouse ayisiyiyo kuphela isivuno sokuqala kwaye sizinzile, kodwa ikwayi thuba lokukhulisa izityalo ze-thermophilic kwimimandla epholileyo. Ukuze i-greenhouse ikwazi ukwenza imisebenzi yayo ngesiqhelo, kufuneka ilungiselelwe ixesha lasehlotyeni. Ndiza kukuxelela ukuba ungayenza njani ngokuchanekileyo.
I-Spathiphyllum: iingcebiso zamagqabi omile. Ungasinceda njani isityalo?
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 30.12.2019
Uluhlaza oluqaqambileyo oluhlaza, amandla amakhulu okukhula kunye ne-inflorescence emangalisayo, efana neeseyile ezincinci ezimhlophe, yenza iSpathiphyllum esinye sezityalo zangaphakathi esizithandayo. Iimpawu ezihle kakhulu kule ntyatyambo yindawo entle - ukwenza ...
Uyenza njani ijeli yokuhlamba ngezandla zakho?
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 31.10.2019
Iisepha ezahlukeneyo ezenziwe ngezandla zithandwa kakhulu namhlanje. Bazithengele ngokwabo, njengomboniso. Ukongeza, zizinto ezintle ezincedisayo kwigumbi lokuhlambela, ngoko ke ayisiyintloni ukubanikela ...
Motoblock "Agat": uphononongo, amaxabiso
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 27.09.2019
Ukuba ungomnye wabahlali basehlotyeni abakhathalela igadi kunye negadi ngokungathandabuzekiyo, ngokuqinisekileyo usive isidingo sokusebenzisa izixhobo zodidi oluthile. Isidingo esinjalo sinokuvela xa ...
Inkxaso yeArch - yintoni? Iindidi ze-instep zixhasa
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 20.12.2019
Xa kufunyaniswa ukuba unenyawo tyaba, iingcali zihlala zicebisa abaguli bazo ukuba basebenzise inkxaso ye-instep kunyango lwayo. Yintoni? Ngaba ezi mveliso zingasentla ziyichaphazela njani impilo yonyawo kunye nomlenze ngokubanzi? Njani…
Iimpawu zokukhulelwa ngosuku lokuqala lokulibaziseka
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 08.10.2019
Phantse wonke umntu obhinqileyo owabelana ngesondo unomdla kwimpawu zokuqala zokukhulelwa. Olona phawu lubonakalayo kukulibaziseka kokuba sexesheni. Ewe, kunjalo, kusekutsha ukuba ungothuke, kuba ukusilela kumjikelo wokuya esikhathini kuya kwenzeka ...
Ukulala iipilisi zomntwana. Khetha okona kulungileyo
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 21.09.2019
Rhoqo, oomama nootata abancinci bajamelana nengxaki xa usana lwabo lucaphuka, lungazoli kwaye ngesizathu esithile lungalali kakuhle. Ukuziphatha komntwana kuchazwa zizinto ezininzi. Inyani yile yokuba ngaphezulu ...
Zingaphi inyanga umntwana aqala ukuzibamba entloko: ingcebiso kubazali
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 02.12.2019
Iinyanga zokuqala zobomi bomntwana lixesha elibaluleke kakhulu nelinomdla kubazali abatsha. Banexhala malunga nayo yonke into, kwaye bahlala bebuza malunga nokuba ziinyanga ezingaphi umntwana aqala ...
Ndimdala kangakanani umntwana wam ukuba ndimhambise esikolweni? Usilungele nini umntwana isikolo?
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 26.10.2019
Ixesha elitsha lifikile, kwaye abantwana bayaphuma, uninzi lwabo lubonakaliswa njenge-indigo. Isizukulwana sangoku sahluke mpela kwesangaphambili. Uninzi lwabantwana lunezakhono ezithile: bayakwazi ukufunda, ukubhala, ukubala, ngelixa ...
Inyanga yesibini yobomi obutsha: ukulala, ukuhamba nokukhula
Ukususela ngomhla wokuqala wobomi bakhe, umntwana uyakhula kwaye akhule ngokukuko. UMama noTata bakhathazekile ngemeko yakhe imini nobusuku, ngakumbi ukuba umntwana unenyanga enye kuphela ubudala. Kubaluleke kakhulu kubo nabaphi na abazali ...
Yintoni esusa ivumba lomchamo wekati: iindlela zokupheka zabantu kunye neemveliso ezithengiweyo
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 06.11.2019
Iikati zithandwa kakhulu njengezilwanyana zasekhaya. Ngokungafaniyo nezinja, awudingi ukuhamba nazo, ngelixa uninzi lwazo lunentlalontle kwaye zikhawuleza ziqhele ...
Page 1 Page 2 ... Page 563 Okulandelayo Page
Imibuzo ye-55 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-1,462.